IFTIINKACUSUB.COM: Jaarkaaga iyo Qabiilkaga iyama xaq badan.?
Mawduucan aan ugu magac daray Jaarkaaga iyo Qabiilkaaga iyamaa xaq badan ,waa mawduuc aad u balaadhan oo ay u bahan tahay in dhinacyo aad u farabadan laga eego,balse waxa aan jeclahay in aan soo koobo oo aanu qalinka iyo qoralku ila taraarin.
Hadii aynu labadan eray,Jaarka iyo qabiilka ,aynu midba goonidiisa wax uga nidhaahno ,iyada oo aynu ku dadaalayno in aynu soo koobno,ayaa midkastaba waxa uu yeelanayaa xuquuq iyo xaq gooniya,balse hadana waxa kuu muuqanaysa in ay kala baaxad wayn yihiin.
Hadii aan qoraal kooban ku soo bandhigo ,waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin ,dadka aad isku qabiilka tihiin iyo kuwa aad jaarka tihiin, waxaa laga yaaba in aad u qaadan waydo faraqa u dhaxeeya labadaasi .
Jaarku waa qofka kuugu dhaw ee kula yaala dhulka aad taalo ee uu gurigu kaaga dhisan yahay ,jaarku waa dadka kaliya ee kaa warhaya ,xaalada aad markasta aad ku sugan tahay,haday tahay mid farxadleh iyo hadii ay tahay mid markaasi murugo leh.
Jaarka waxa aad tihiin isku baahi,hadii maanta biyahu ay gurigaga ka maqan yihiin waxa hubaala in guriga jaarkaaguna aanu biyo lahayn,waxkasta oo nolosha adanaha ka mida jaarku waa ay wadagaan.
Jaarku waxyabaha uu nolosha wadaaga mahan mid aan halkan kusoo koobi karo,ogsoonow guriba guriga uu kaaga dhaw yahay dhinaca masaafada,waa uu kaaga xaq badan yahay,magalaba magalada ay kaaga dhawdahay waa ay kaaga xaq dhawdahay.
Maxaa keenay in dadka jaarka ahi ay isku nafkaliya ay noqdaan? jawaabti iyada oo fudud waxa ay noqonaysaa dhawaanshaha iyo iska warhaynta,waayo waxaa dhici karta in qoys aad isku qabiil tihiin ay yalaan meel kuu jirta 2000 klm ,taas macnaheedu waxa ay tahay waxaa kaga xaq leh jaarkaaga.
Guriga aad jaarka tihiin dadka ku nooli maalintii imisa jeer ayay kusoo waregaan,adiguse maalintii imisa jeer ayaad u wareegtaa gurigooda oo aad gashaa,adiga oo xaladu kala duwan u booqanaya gurugasi jaarkaaga ah ;waxa kaloo iyana mid subxanala ah hadii uu jaarku kugu xumaado.
Wadamadan Yurub iwm malaha wax layidhaa Inadeer sidoo kalana malaha wax layidhaa Jaar,waa ay jirtaa oo guryahu waa ay isku wada dhagan yihiin,balse dadka ku nool kama dhaxayso xuquuqdii jarnimadu,waxa dhici karta labada reer ee jaarka ahi ay kulmaan oo kaliya marka ay albaabada guryaha ka galayaan kadibna inta ay gacanta isu tagaan ay isku maca salameyaan Hey Hey .
Nabigu csw isaga oo ka hadlaaya xaqa uu jaarku isku leeyahay waynidiisa ayaa waxa uu yidhi.
Qabiilku dhinaca diinta iyo dhinaca dadnimadaba ,waxaa jira xuquuq iyo xaq uu leeyahay,taas oo mida ugu badani ay tahay in la isku dhaxlo,balse ma la socotaa in uu dhaxalkaaga qaadan karo mid noloshaada oo dhan aanad markaliya aanad arag,xataa waxaa qaadan kara dhaxalkaaga ,mid qabiilka aad adigu aad tahay aan ahayn ee aad Somali Maxamed iskutihiin.
Qabiilku maaha wax sidaasi usii cilmi badan,isku qabiil ayaynu nahayna wax munafacaada oo la sheego ma ka helaysid hadii aad usoo fiirsato,waa ay jiraan dad dhinaca qabiilka ama xasabada isku xidhiidhiya,balse waxa ayniga ila tahay in ay ka xoog badan tahay cida ama qofka aad markaasi bulshada iska fahamtaan.
Anigu kama hadlaayo in dhamaan qabiilku uu yahay wax shalfis ah oo aan loo baahnayn,qalad ha ka fahmin saxiib qoraalkayga,balse waxa aan ka hadlayaa qabiilku halka uu maanta Somali ka joogo.
Waxa aan waayay hal qabiil oo walaalo ah oo aan hadana nolosha dagaalo iyo dhibaatoyin aanay ka dhex dhicini ma jirto,waxa ugu wayn ee ay isku dileena waxa uu yahay qabiilka oo hoos u daadegay.
Ma dhici kartaa,suura galna ma tahay,in qof aan qabiilkaaga ahayni uu kaaga waxtarbato iyo munaafacaad batto of qabiilkaaga ah?haaaaaa,anigu sidaas ayaan isleeyahay,waxaana laga yabaa in dad badani ay fikirkan ila qabaan.
Dadka qaar waxa dhici karta in ay fikradan layabaan,oo ay isyidhaadaan,sidee ayaa nin qabiilkaaga ah "Inadeeeeeeerkaa" uu kaaga munafacaad badan karaa nin *qalaaaaaaaad,oo aan qabiilkaaga ahayn.
Balse aan meel aad u dhaw wax kaa tuso,adiguna ila eeg in ay suura gal tahay iyo inkale; kaba soo qaad safar ayaad gashay,waxa aad dhex maraysaa dad aan qabiilkaaga ahayn,kadibna safarkii ayaa kugu dheeraaday,wax la cuno iyo wax la cabo toona ma haysatid,cida kaliya ee markaasi aad gargaar waydiisan kartaa Rabbi SW ka bacdi waa cida aad deegaankooda dhex marayso ;hubaal waxaa ah in aanad ku hungoobayn.
Hadii aan maanta deegaan ku ahay magalada Hargaysa balse aniga kan dad iigu xiga ee ila qabiilka ahi uu ku dhaqan yahay magalada Ceerigaabo,hubaal waxaa ah in aanu isxaal og-nahay kan aanu wada deganahay.
Ma-ogtahay in qabiilku uu leeyahay dhibaatoyin aad u farabadan,ugama jeedo qabiilka ayaa leh balse inaga ayaa ka dhignay in qabiilku uu noqdo mid dhibaatoyin la saaxiib ah,tusaale ahaan,nin reerkiina ah ayaa waxa uu dil u gaystay qabiilkale,xaaladaasi markaaba saw ku tusin mayso in ninka u qoolani uu adiga yahay,aana qabiil awadeed.
Ma-lasocotaa in aan saxiibka saxiibka loo dilin,mana jirto wax layidha aano saxiib,marka laga tago middi dhalinyaranimadii,oo ahayd in ay dhalintu xaafado iyo saxiibo isku weeraraan,miyanay markaa saxiibku ka fiicnayn qabiilka.
Ma gafsani in nin inadeerkaa ahi uu noqon karo saxiibkaa laxmiya oo nolosha kula qaynsada, ,balse ha ilaabin shayga ugu muhiimsan ee isku kiin hayaa qofkaasi maaha inadeerka ee waa saxiibka iyo isfahamka.
Runtii dad badan oo an ka mid ahay,waxa ay aamin sanyihiin in saxiibka qaaliga ahi uu ka fiican yahay inadeerka qaaliga ah, way dhici kartaa oo turuuftu waa ay kala kaxaynkartaa laba saxiib ah ama laba inadeer ah balse hadana saxiibku maaha wax lagu kaftamo marka uu yahay mid nolosha dhib iyo dheefba kula qaynsanaaya.